Dhismayaasha | January 2020
Editor Ee Doorashada January 26,2020
Ugu Weyn Ee Dhismayaasha
Waxaan sariiraha ka dhignaa si habboon u sameynta aqalka dhirta lagu koriyo: goob, ballac, dherer, sawir
Diyaarinta sariiraha ee lagu koriyo, geedi socodka u baahan hab gaar ah. Ku guuleysiga khudaarta sii kordhaya waxay ku xiran tahay meesha ay ku habboon yihiin iyo qaabeynta. Taasi waa sababta su'aasha ah sida loo sameeyo sariiraha ee aqalka dhirta lagu koriyo waa mid walaac badan oo bannaanka u ah. Sariiraha ku yaal aqalka dhirta lagu koriyo waxay ku yaalaan qiyaastii dhibcaha mugdiga ah. Sida sariiraha lagu dhisi doono aqalka dhirta lagu koriyo waa in la tixgeliyaa marxaladda rakibidda.
Waxaan u dhisnaa barnad si aan si dhaqso ah ugu siino gacmahooda
Dabcan, iyada oo aan barn on sawirka waa mid aad u adag. Qalabka beerta isku midka ah ayaa duubnaa. Seeds. La goostay. Baaskiil Gaadiidka Haa, waxyaabo badan. Si aan loo jiidin guriga oo dhan, waxaa jira daadad. Dabcan, waxaad kiraysan kartaa dhismayaasha, waxayna kuu qaban doonaan wax kasta oo adiga kugu habboon. Laakiin waxaa suurtagal ah in la sameeyo barn gacmahaaga, haddii aad ogtahay sida ciddiyaha ka duwan yahay tuubbada.
Diyaargarow dalkaaga ah - raaxo dammaanad iyo nadaafad
Xadiiqaddu marwalba waxay siisaa jawi wanaagsan, ama kaliya nasasho buuxda oo ka soo jeeda nolosha magaalada ee jilicsanaanta dabiiciga ah. Qofka si dhakhso ah ama ka dib wuxuu dareemayaa inuu kali ahaan u yahay kaynta, webiga, xayawaanka, samada, qorraxda sida ugu macquulsan. Wuxuu siinayaa nabad iyo dareen weyn. Hadda ka dib "xagga samada ilaa dhulka."
Waxaan si madaxbannaan u waraabinaynaa beerta
Dhirtayadu waa xayawaankayaga, laakiin marar badan ma joogi karno iyaga saacad kasta. Haddii aad la socoto dhibaatadan, fiiro gaar ah u waraabinta waraysiga beerta beerta iyo beerta khudradda - tani maaha kaliya inaad ka badbaadiso booqashooyinka maalinlaha ah ee kuyaala guriga, laakiin sidoo kale lacag ayaa lagaa keydiyaa. Ha u malayn in "automatic" ay ku lug leedahay qalab aad u fara badan, taas oo weliba, qarashkeedu noqon doono dammaan.
Saldhig u ah aqalka dhirta lagu koriyo oo ay gacmahooda u leeyihiin: noocyada, talooyinka, sawirrada
Bannaanka u badan, samaynta go'aanka ah si loo dhiso aqalka dhirta lagu koriyo ee goobta, ha ka fekerin aasaaska lagu kalsoon yahay. Dabcan, aqalka dhirta lagu koriyo ma aha qaab dhisme oo culus ee carrada ka soo yar yar. Sidaa darteed, dad badani waxay aaminsan yihiin in aasaaska lagu kalsoon yahay loo baahan yahay oo keliya dhismayaasha beeraha ee caasimadda, iyo qorrax madow oo caadi ah ayaa si toos ah loogu dhigi karaa dhulka.
Sigaar-cabidda guriga ayaa sameeya
Guriga ama cottage ayaa ah midka ugu haboon ee loogu talagalay sameynta sigaarka yaryar ee yaryar, u ogolaanaya waqti kasta inuu ku raaxeysto hilibka sigaarka cabba, hilib doofaar, digaaga ama kalluunka. Dhismaha qiiqa sigaarka uma baahna kharashka dhaqaale ee titanic ama aqoon aad u qoto dheer oo dhismaha ah, natiijadu waxay ka sarreysaa dhamaan filashooyinka, sababtoo ah mid ka mid ah mashiinka dukaanka ugu casrisan waxaa lagu barbar dhigi karaa cuntada guriga lagu diyaariyo ee gacmahaaga.
Sameynta beerta geedo leh gacmahaaga
Qofka caajiska ah ee cawska ee beeraha iyo beeraha ee dalkeenna aan la dabooli karin. Waxay ku saabsan tahay ciriiri! Fudud oo ah qarniyo qarniyo badan ayaa ilaaliyey dalaggii geerida. Oo haatan illoobo, oo aan micne lahayn. Laga yaabee in jeexjeexintu aysan ahayn mid waxtar leh oo ka ilaalisa xayawaanka yaryar ama shimbiraha. Si kastaba ha ahaatee, qaybta heesaha ayaa aan la joojin.
Dhismaha Maqaar leh gacmahaaga
Maqaasi waa xarun lagu keydiyo miraha, khudradda, alaabada kala duwan iyo sahayda. Marka la eego heerka qoyaanka iyo heerkulka taageerada, heerkulku wuxuu u adeegaa nooc ka mid ah "qaboojiye" badeecadaha, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad muddo dheer ku hayso. Maqasyadu badanaa lagama maarmaanka u yahay guryaha dalka iyo guryaha.
Xayawaannada shimbiraha waxay ka sameeyaan qalabka kaydka
Wixii quudinta shimbiraha waxaad si madaxbanaan u sameysan kartaa quudin ama quudinta miisaska qalabka kala duwan. Badanaa, dhalooyinka caagga ah, sanduuqyada kartoonada ama fiyuuska ayaa loo isticmaalaa quudinta. Dhismaha dhamaystiran waxaa lagu dhejiyaa dhoobo ama geed, waxaana sidoo kale lagu dhejin karaa derbiga dhismaha.
Dhismaha musqusha alwaax ee dalka oo leh gacmahooda
Marka aad qabanqaabinayso dhulka banaankeeda, waxaad u baahan tahay inaad samayso, marka hore, qaybinta dhulkeeda marka loo baahdo, oo ubaahan dareenka ugu horreeya dhismaha. Kuwaas waxaa ka mid ah musqusha ama musqusha. Iyadoo aan la joogin, joogitaanku wuxuu noqon doonaa mid aan haboonayn sida qol kale ama shay kale. Dhismaha musqusha waa in la fuliyaa si waafaqsan shuruudaha nadaafada lagu sharaxay dukumintiyada sharciyeynta.
Noocyada iyo qaababka dhismaha gawaarida si ay gacmahooda u siiyaan
Ma jiraan meel banaan oo casri ah oo aan la maleyn karin iyada oo aan lahayn duufaan jilicsan, halkaas oo aad cabi karto shaah kokey, la fadhiisto saaxiibo ama ku neefso hawada cusub marka aad ku raaxeysaneyso dabeecadda. Tayada dadka intiisa kale waxay kuxirantahay sida muuqaalka indhaha. Gawaarida Xagaaga Summer Gazebo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagama maarmaanka u ah dhismaha guri guri.
Waxaan dhistaa dayrarka qurxinta leh gacmahooda
Deedka ubax waa wax aad u xiiso badan oo qurux badan. Dhererka xayndaabka way kala duwanaan karaan waxayna ku xiran tahay rabitaanka macaamiisha. Oggolow, inta badan waxaa laga yaabaa inaad la kulanto su'aasha ah in xayndaabka sare lagu xalliyo waa go'aan aan mugdi ahayn. Tani waxay sababi kartaa waxyaabo badan, oo ay ku jiraan muusikada.
Waddooyinka beerta. Waxyaabaha naqshadda sameeya ee aad sameysid
Wadiiqooyinka beerta ayaa ka badan kaliya xarigga dabaysha oo kuu ogolaanaya inaad si fudud ugu dhaqaaqdo beerta. Waxay qaadataa ma aha oo kaliya hawlkarnimada, laakiin sidoo kale waa qayb ka mid ah qurxinta of your site. Sidaa daraadeed, waa mid aad u muhiim ah in muuqaalkoodu uu ku haboon yahay qaabka guud ee muuqaalka.
Kululeynta casriga ah ee lagu koriyo iyo noocyada kale ee kuleylka: biyaha, hawada, tamar-dhuleedka, isbarbar dhiga, faa'iidooyinka, dabeecadaha
Xarumaha aqalka dhirta waxaa loo isticmaali karaa oo keliya guga hore ama xilliga dayrta si loo kordhiyo shaqada beerta. Waxa ugu muhiimsan waa heerkulka saxda ah ee lagu koriyo ee xilliga qaboobaha. Goobaha jilicsan ee loo qaabeeyay oo si wanaagsan loo sameeyey oo loogu talagalay koriyo ayaa si buuxda loogu isticmaali karaa xilliga qaboobaha.
Siyaabo kala duwan oo loo abuuro aqalka dhirta lagu koriyo ee qajaarka ayaa sameeya.
Koraaya khudradda noocan oo kale ah sida qajaar xagaaga xagaaga ayaa u baahan in la abuuro xaalado aan fiicnayn. Wax-soosaarka ugu weyn waxaa laga heli karaa iyadoo la isticmaalayo koriyo si loogu xafido qajaarka. Tilmaamaha Qalabka aqalka dhirta loogu talagalay qajaarka waa inuu bixiyaa shaqeynta qudaaraynta kuleylka koritaanka iyo horumarka.
Qaybta dhismaha ee canabkuna waxay sameeyaan
Go'aaminta in ay ku hawlan tahay beerista canab, waa in maskaxda lagu hayaa in warshadani ay tahay sida liyu-u eg, oo aan lahayn qaab gaar ah, sidaas darteed waxay u baahan tahay taageero. Labadii sanno ee ugu horreysay ka dib markii laga beerto duurka canabku waxay u baahan yihiin taageero ku meel gaar ah. Laba sano kadib, waxay noqotaa lagama maarmaan in la dhiso taageero joogto ah.
Dhamaan madadaalo ku saabsan koriyo beeraha beerta lagu qurxiyo
Si ka duwan aqalka dhirta lagu koriyo, kulaylka kaliya ee qorraxda, aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate) waxaa la siiyaa ilo dheeraad ah oo kuleyl ah (tusaale, cunto kariye ama lakab pereperevayuschey). Heerkulka joogtada ah ee kuleylka ah ee dhirta lagu koriyo ayaa dhirta dhirta u fidiya qaab habboon oo haboon oo habboon oo loo kobcayo iyo kobcinta miraha. Tilmaamo fudud, mid adag, midab badan leh. Si aan loogu nadiifin tamarta qaaliga ah qolalka ballaaran, kuleylooyinka waxaa lagu sameeyaa miisaan yar oo gudaha ah.
Cagaarshow fudud, isafgaran oo dabacsan "Agronom"
Iyadoo la isticmaalayo habka aqalka dhirta lagu koriyo "Agronom" ayaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah xalka ugu fiican marka la eego waxtarka iyo fududeynta hawlgalka, iyo sidoo kale fududeyn iyo kalsoonida naqshadeynta. Waxyaalahaas oo ay ku jiraan isticmaalka qalabka casriga ah waxay u kala soocaan xariiqda lagu koriyo oo lagu qurxiyo oo ay siiyaan fursad ay ku helaan natiijooyin wanaagsan marka ay sii kordhayaan geedo ku yaal dhul furan.
Goosashada hore ee wanaagsan oo leh miro yar oo lagu koriyo geedo
Bannaanka u khibrad leh ogaa in geedo koray on waddada ka xoog badan yihiin dhirta indoor. Bilowgii maalmaha ugu horeeya ee diiran, waxay ufiican tahay inay soo saarto geedo ka mid ah dalagyada khudradda laga bilaabo dhismaha si ay u noqoto mid daadsan oo caadaysto hawada furan. Si loo ilaaliyo muddadan, waxaa lagu isticmaalaa koriyo qaas ah iyo garaafyo yar-yar.
Cagaaran oo loo guuri karo oo loo yaqaan "greenhouse"
Xaaqin hore, iyo isla markiiba ka dib dhaxan, duufaan guga, barafka ugu horeeya ee soo daahay, waa in la yiri: nolol xagaaga xagaaga waxaa ka buuxa wax la yiraahdo, laakiin had iyo jeer ma ahan mid cajiib ah. Oo haddii aad rabto in aad ka ilaaliso geedahaaga ka soo baxa dabiiciga ah, waxaan soo jeedinaynaa isticmaalka eco-aqalka dhirta "Dachny". Tani waxay aad u sahlan, naqshad fudud iyo habdhismeedku waxay kuu ogolaaneysaa inaad si deg deg ah iyo dadaal la'aan u kordhiso wax-soosaarka aqalka.
Qodobbada waxtarka leh ee jeeriga, iyo sidoo kale beeritaanka iyo daryeelidda dhaqanka
Waa maxay isticmaalka shaaha-shaaha ee jirka haweenka ah
Tilmaanta iyo kobcinta yaanyo "Yablonka Ruushka" ee dhul furan
Colibacteriosis ee weylaha: tallaalka, isbedelka pathoanatomical, daaweynta guriga
Waa maxay faa'iidooyinka iyo qasaarada marka loo isticmaalo gazoblokov
Geedaha sirdoonka ee Siberia
Noocyo cusub oo tufaax ah
Isticmaal canab dayrta
Geedka berriga koraya
Muuqaal shakhsi ah
Bacriminta sarreenka xilliga qaboobaha
Saliidaha muhiimka ah
Noocyo tufaaxa Colony ah
Kala duwanaantan waxay shaki ku noqon doontaa dhammaan dadka jecel yaanyada jaalaha ah ee waaweyn. Haysashada tiro ka mid ah guryaha cajiibka ah, ma aha wax adag in la joogteeyo oo la siiyo dalag fiican. Tani waa noocyo kala duwan oo loo yaqaan "King Golden gold". Maqaalkeena waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan yaanyadaas. Akhri sharraxaadda kala duwan ee ku dhex jirta, si aad u ogaatid sifooyinkaa, baro wax-qabadka maareynta beeraha. Read More
Sifooyinka geedka canaasiga ah ee sii kordhaya: beerashada iyo daryeelka
Canab koraya ee canab korriin ah: sababta aan miro lahayn? Taabashada biyaha iyo tiknoolajinta quudinta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhismayaasha 2020